ဆောင်းပါးများ - ယေရှုခရစ်တော်၏ဗျာဒိတ်တော်
ေမ ၁၆၊​ ၂၀၂၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၂၁ အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
မှတ်ချက်- 1260 ပရောဖက်ပြုချက်နေ့ရက်များကို 6th နှင့် 7th တံပိုးမှုတ်တမန်သတင်းစကားများဖြင့်စတင်ပြောဆိုသည်။ “ဗျာဒိတ်လမ်းပြမြေပုံ” ကိုလည်း ကြည့်ပါ။ ပရောဖက်ပြုချက်ဆိုင်ရာ အချိန်ကာလ 1,260 ရက်ကို သမ္မာကျမ်းစာတွင် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ သတ်မှတ်ထားသည်။ ဤအထူးအချိန်ကာလသည် ဘုရားသခင်လူမျိုး၏သမိုင်းတွင် မှောင်မိုက်သောအချိန်ကို အမြဲတမ်းသတ်မှတ်ပေးသည်၊ ထိုနေရာတွင် ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ ၇ ကြိမ်မြောက်တံပိုး, သားရဲ, မိစ္ဆာဘုရားရှိခိုးကျောင်း, ဗျာ _၁၂, ဗျာဒိတ်ကျမ်း _၁၃ တဂ် 1260 ရက်, နဂါး
9 ရက်၊ 2020 ခုနှစ် 1 ၊ 2020 အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
အချုပ်အားဖြင့်၊ သာသနာပြုဝါဒသည် Scofield Reference Bible မှတစ်ဆင့် သမ္မာကျမ်းစာထဲသို့ ထည့်သွင်းထားသော သမ္မာကျမ်းစာမဟုတ်သော ယုံကြည်ချက်စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လူများ၏အာရုံကို ဖမ်းစားရန်နှင့် သမ္မာကျမ်းစာအတွင်း ဝိညာဉ်ရေးလွှမ်းမိုးမှုကို လျှော့ချရန်အတွက်၊ Dispensationalism သည် ကျမ်းချက်များစွာကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကာ လူတို့ကို အပြစ်မှ လုံးလုံးလွတ်မြောက်ရန် ယေရှုခရစ်၏တန်ခိုးကို ငြင်းဆိုသည်၊ ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ ဖန်ပုလင်း ၇ လုံး, အတုအယောင်တမန်တော်မြတ်, မှားယွင်းသောသွန်သင်ချက်များ, ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်, ဗျာ _၂၀ တဂ် အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးမှု, ပီတိ
ပီတိသင်ကြားခြင်း ၊ မှန်ပါသလား ။
မတ္ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၂၉ ရက်၊ ၂၀၂၀ အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
မှတ်ချက်- သင်နှစ်သက်ပါက၊ ဤသည်မှာ PDF ဗားရှင်းဖြစ်သည်- “ချီဆောင်ခြင်းသွန်သင်ခြင်း မှန်သလော” “ပီတိ” ၏အယူဝါဒသည် ကယ်တင်ခြင်းခံရသောခရစ်ယာန်အားလုံး သို့မဟုတ် အများစုကို ယေရှုနှင့်အတူ ကောင်းကင်ဘုံသို့ချီဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အမာဆိုထားသည့် သွန်သင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် ကမ္ဘာတည်သဏ္ဍာန်ဖြင့် ဆက်လက်တည်ရှိနေချိန်ဖြစ်သည်။ တခြားလူတိုင်း… ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ မှားယွင်းသောသွန်သင်ချက်များ, ဗျာဒိတ်ကျမ်း _၁၉, TrueBible Doctrine တဂ် ပီတိ, ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း, ဒုက္ခ
“မကြာမကြာဖြစ်ရမည့်အရာများကို မိမိကျွန်တို့အားပြရန် ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသော ယေရှုခရစ်၏ဗျာဒိတ်တော်၊ ကောင်းကင်တမန်အားဖြင့် မိမိကျွန်ယောဟန်ထံသို့ စေလွှတ်၍ အမှတ်အသားပြုတော်မူ၏။” (ဗျာဒိတ် ၁:၁) မှတ်ချက်- ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏သတင်းတရားသည် ယေရှုနှင့်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်အတွက် အလွန်အရေးကြီးသည်၊ ထို့ကြောင့် ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်, ဗျာ ၁, သစ္စာနှင့် သစ္စာ တဂ် စစ်မှန်သောဝတ်ပြုရေး
ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
9 ၊ 2019 8 ၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်၊ ယေရှုခရစ်၏ သက်သေခံတော်မူချက်နှင့် မြင်သမျှတို့ကို မှတ်တမ်းတင်သောသူ၊ (ဗျာ။ ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ ဗျာ ၁, ဘုရားစကားတော် တဂ် စစ်မှန်သောဝတ်ပြုရေး
ဗျာဒိတ်တော်သည် နားလည်ခြင်းနှင့် နာခံခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။
9 ၊ 2019 အမှတ် ၇၊ ၂၀၁၉ အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“ဤပရောဖက်ပြုချက်စကားကို ဖတ်ရှု၍ ရေးထားသမျှတို့ကို စောင့်ရှောက်သောသူသည် မင်္ဂလာအချိန်ရောက်လုနီးပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။ (ဗျာ။ ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ ဗျာ ၁ တဂ် အလင်း
9 ၊ 2019 အမှတ် ၆၊ ၂၀၁၉ အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“အာရှိပြည်၌ရှိသော အသင်းတော်ခုနစ်ပါးတို့အား ယောဟန်အား၊ ကျေးဇူးတော်နှင့် ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေသော၊ ပလ္လင်တော်ရှေ့၌ရှိသော ဝိညာဉ်ခုနစ်ပါးမှ၊ (ဗျာဒိတ် ၁:၄) စာအုပ်၏အစတွင် အသင်းတော်ခုနစ်ခုအား တိကျသောနည်းလမ်းဖြင့် ဖော်ပြထားသည်... ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ၇, ဘုရင်တို့၏ဘုရင်, ဗျာ ၁, ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီး, အနန္တ တဂ် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်, တရားစီရင်ခြင်း။
ယေရှုခရစ် – အရာခပ်သိမ်း၏ “ဦးစွာမွေးဖွားသူ”
9 ၊ 2019 5၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“… သေခြင်း၏အဦးဖြစ်တော်မူသော…” (ဗျာဒိတ် ၁:၅) ယေရှုခရစ်သည် အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်အတွက် ကောင်းမြတ်ပြီး အရေးပါအရာရာအားလုံးတွင်၊ သခင်ယေရှုသည် ပထမနှင့်အရာအားလုံးထက် ထူးမြတ်သည် ဟူသော အဓိပ္ပါယ်မှာ “အခြားသူများထက် သာလွန်သည်၊ ထူးချွန်သည်။" ကောင်းကင်ခမည်းတော်က ဤသို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်... ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ ငါတို့အတွက်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ, ဘုရင်တို့၏ဘုရင်, ဗျာ ၁, ဘုရားသားတော်, အနန္တ, သစ္စာနှင့် သစ္စာ တဂ် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း
သစ္စာရှိသက်သေ ယေရှုခရစ်၏ သက်သေခံချက်
9 ၊ 20194၊ 2019 အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“သစ္စာရှိသောသက်သေဖြစ်တော်မူသောယေရှုခရစ်၏အထံတော်မှ…” (ဗျာဒိတ် ၁:၅) ယေရှုက “ငါသည် ကိုယ်ကိုကိုယ်သက်သေခံ၍ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောခမည်းတော်သည် ငါ့အကြောင်းကိုသက်သေခံတော်မူ၏။ John 8:18 ယေရှု၏သက်သေခံချက်သည် စိတ်ဝိညာဉ်တိုင်းအတွက် သစ္စာရှိသက်သေဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်၏ အမှန်တရားနှင့် ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ သစ္စာနှင့်သစ္စာ, ဗျာ ၁ တဂ် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်
သခင်ယေရှုသည် ဘုရင်တို့၏ဘုရင်ဖြစ်ပြီး သခင်တို့၏သခင်ဖြစ်သည်။
9 ၊ 20193၊ 2019 အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“…မြေကြီး၏ရှင်ဘုရင်တို့၏မင်း…” (ဗျာဒိတ် ၁:၅) ယေရှုသည် အပြစ်နှင့်သေခြင်းကို အနိုင်ယူရုံသာမက မြေကြီးပေါ်ရှိ အုပ်စိုးရှင်များနှင့် တန်ခိုးအာဏာအားလုံးကို အုပ်စိုးသော “မင်းသား” ဖြစ်သည်။ (၁ ကောရိန္သု ၁၅:၂၀-၂၆ နှင့် ကောလောသဲ ၁:၁၃-၁၉ ကိုကြည့်ပါ) အဘယ်အရာမျှမရှိပေ၊ ရှေ့တော်၌ ဦးညွှတ်၍ လုံးလုံးလျားလျား လက်အောက်ခံခြင်းမပြုသင့်သောအဘယ်သူမျှမရှိ။ ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ ဘုရင်တို့၏ဘုရင်, ဗျာ ၁, ဘုရားသားတော် တဂ် နာမည်ကောင်း
သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်ပြီး သူ၏ကိုယ်ပိုင်အသွေးတော်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆေးကြောပေးခဲ့သည်။
9 ၊ 20192၊ 2019 အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“…ကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်တော်မူသောအရှင်အား ကိုယ်တော်၏အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များမှ ဆေးကြောပေးတော်မူပါ” (ဗျာဒိတ် ၁:၅) ဤကျမ်းချက်က ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြသနေသည့် ကြီးစွာသောနက်နဲသောအရာကိုပင် နားလည်နိုင်သလော။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အဆုံးစွန်သောစျေးကိုပေး၍ “ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်၍ ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ ငါတို့အတွက်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ, ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်, ဗျာ ၁ တဂ် သွေး
ယေရှု၏နိုင်ငံတော်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်၏ဘုရင်များအဖြစ် စိုးစံနိုင်သည်!
9 ၊ 2019 1 ၊ 2019 အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“ဘုရားသခင်နှင့် ခမည်းတော်၏အရာ၌ ငါတို့ကို ရှင်ဘုရင်နှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ၌ ခန့်ထားတော်မူပြီ။ ဘုန်းတန်ခိုးအာနုဘော်ရှိတော်မူစေသတည်း။ အာမင်။” (ဗျာဒိတ် ၁:၆) အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ယေရှုသည် “ဘုရင်တို့၏ဘုရင်၊ အရှင်တို့၏သခင်” ဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ ယေရှုသည် ဘုရင်တစ်ဆူတည်းသာမက ဘုရားသခင်လက်ခံသော ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းလည်းဖြစ်သည်။ ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ စစ်မှန်သောဝန်ကြီးဌာန, ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း, ဘုရင်တို့၏ဘုရင်, ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်, ဗျာ ၁ တဂ် ဓမ္မ, အောင်နိုင်သူ
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ “မိုးတိမ်” ၌ အမြဲလာနေပါသည်။
9 ၊ 2019 31 ခုနှစ်၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“မိုဃ်းတိမ်များနှင့်အတူကြွလာတော်မူသည်…” (ဗျာဒိတ် ၁:၇) တိမ်များ” ကို ဓမ္မဟောင်းနှင့် ဓမ္မသစ်တစ်လျှောက်လုံး တန်ခိုးကြီး “အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်” ၏ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ဖွယ် မျက်မှောက်ပြုခြင်းကို သက်သေခံသည့် အထောက်အထားအဖြစ် အသုံးပြုထားသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ၎င်းတို့သည် စွမ်းအားပြည့် (မိုးကြိုးနှင့် မြေကြီးကို လှုပ်ခါနေသော မိုးခြိမ်းသံ) နှင့် ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ဖွယ် တန်ခိုးနှင့် ပြည့်စုံသော တိမ်တိုက်များဖြစ်သည်။ ဘယ်တော့လဲ … ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ ဗျာ ၁, အနန္တ တဂ် တိမ်များ, မီး, စစ်မှန်သောဝတ်ပြုရေး
ယေရှုသည် “မိုးတိမ်၌” အကြိမ်များစွာ ကြွလာနေပြီ၊
9 ၊ 2019 30၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“ကြည့်ရှုလော့၊ မိုဃ်းတိမ်များနှင့်အတူ ကြွလာတော်မူသည်” (ဗျာဒိတ် ၁:၇) ယေရှုသည် နောက်ဆုံးနေ့၌ “မိုးတိမ်၌” တစ်ဖန်ပြန်ကြွလာလိမ့်မည်၊ သို့သော် ယေရှုသည် ဝိညာဉ်ရေးအရ “မိုးတိမ်၌” အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကြွလာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်... ဆက်လက်၍ ၎င်းက ဆက်လက်ဖော်ပြမည်ဖြစ်သည်။ သူ့အတွက် “သက်သေများ” ရှိနေသရွေ့ ထိုလမ်းကို လာခဲ့ပါ။ (မှတ်ချက်။ ။ ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ ဘုရင်တို့၏ဘုရင်, ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်, ဗျာ ၁ တဂ် တိမ်များ, ကောင်းကင်ဘုံ, လျှပ်စီးကြောင်း, ပလ္လင်, စစ်မှန်သောဝတ်ပြုရေး
ယေရှုသည် “မိုးတိမ်၌” တစ်ဖန်ကြွလာမည်၊
9 ၊ 2019 29 ရက်၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“မိုဃ်းတိမ်များနှင့်ကြွလာတော်မူသည်…” (ဗျာဒိတ် ၁:၇) ယာကုပ် ၄:၁၄ တွင် ဤသို့ဖော်ပြထားသည်– “သင်တို့အသက်သည် အဘယ်အတွက်ကြောင့်နည်း။ ခဏလောက်ပေါ်လာပြီး ပျောက်သွားတဲ့ အခိုးအငွေ့တောင် ရှိတယ်။” အငွေ့တစ်ချက်က အရေးမပါသလို သတိမထားမိသလောက်ပါပဲ။ ပူနွေးစိုစွတ်သော အခိုးအငွေ့များစွာ စုရုံးလာသောအခါတွင်မူ သိသိသာသာ ကွာခြားသွားသည်... ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ ကောင်းကင်ယေရုရှလင်, ဘုရင်တို့၏ဘုရင်, ဗျာ ၁, ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီး, အနန္တ တဂ် နတ်သမီးလေး, တိမ်များ, လျှပ်စီးကြောင်း, မိုးကြိုး, စစ်မှန်သောဝတ်ပြုရေး
ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပါအဝင် အရာအားလုံး၏အစနှင့်အဆုံးဖြစ်သည်။
9 ၊ 2019 28 ရက်၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“ငါသည် အလဖနှင့် အိုမီဂါ၊ အစအဦးနှင့် အဆုံးဖြစ်သည်ဟု အနန္တတန်ခိုးရှင် ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ~ ဗျာဒိတ်ကျမ်း 1:8 “ပဲစေ့များယိုဖိတ်ခြင်း” ဟူသောအသုံးအနှုန်းကို သင်ကြားဖူးကောင်းကြားဖူးပေမည်၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဇာတ်လမ်း၏အနှစ်သာရ သို့မဟုတ် “အောက်ခြေမျဥ်း” ကို ပေးသနားပါ။ ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း, ဘုရင်တို့၏ဘုရင်, ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်, ဗျာ ၁, အနန္တ တဂ် အောင်နိုင်သူ
ဆင်းရဲဒုက္ခ၌ အဖော်တစ်ဦးနှင့် ယေရှုခရစ်၏ သည်းခံခြင်း။
9 ၊ 2019 27 ရက်၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“ငါယောဟန်သည် သင်တို့၏ညီဖြစ်လျက်၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ၌လည်းကောင်း၊ ယေရှုခရစ်၏နိုင်ငံတော်နှင့် သည်းခံခြင်း၌လည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ယေရှုခရစ်၏သက်သေခံချက်အတွက် ပါမုတ်ဟုခေါ်သော ကျွန်း၌ရှိခဲ့သည်။” (ဗျာဒိတ် ၁:၉) ယောဟန်သည်လည်း ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း အသက်ရှင်ခဲ့ပြီး ယေရှု၏ သက်သေခံချက်ကိုလည်း ရရှိခဲ့သည်။ ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်, ဗျာ ၁, နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းသူ တဂ် ဒုက္ခ
ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ကွယ်တွင်ရှိသော မဟာဧဝံဂေလိတံပိုးဖြင့် သတိပေးထားသည်။
9 ၊ 2019 26 ရက်၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“ငါသည် သခင်ဘုရား၏နေ့၌ ဝိညာဉ်တော်၌ရှိ၍ တံပိုးမှုတ်သကဲ့သို့ ကြီးသောအသံကို ငါ့နောက်၌ကြားရ၏” (ဗျာဒိတ် ၁:၁၀) “သခင်ဘုရား၏နေ့၌ ငါသည် ဝိညာဉ်တော်၌ရှိ၏…” ယောဟန်သည် ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရသော်လည်း၊ သူသည် ကယ်တင်ရှင်အတွက် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကို ခံစားခွင့်ရရှိသောကြောင့် ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ ဘုရားသခင်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ, ဗျာ ၁, ဘုရားစကားတော် တဂ် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်, အချစ်
အာရှတိုက်ရှိ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း ခုနစ်ကျောင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့လည်း
ေမ ၁၆၊​ ၂၀၂၂ 25 ရက်၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“ငါသည် အလဖနှင့် အိုမီဂါ၊ အဦးဆုံးနှင့် နောက်ဆုံးဖြစ်၏ဟု ဆိုလျက်၊ သင်မြင်သောအရာကို စာအုပ်၌ရေး၍ အာရှ၌ရှိသော အသင်းတော်ခုနစ်ပါးထံသို့ ပို့လော့။ ဧဖက်မြို့၊ စမုရနမြို့၊ ပေရဂမုတ်မြို့၊ သွာတိရမြို့၊ သာဒိမြို့၊ ဖိလဒဲဖိမြို့၊ လောဒိကိမြို့တို့၊ (ဗျာဒိတ် ၁:၁၁) သတိပေးသောအသံ၊ ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ၇, ဗျာ ၁, သစ္စာနှင့် သစ္စာ တဂ် သမိုင်း
9 ၊ 2019 25 ရက်၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာ ဖော်ပြတဲ့ သမိုင်းဆိုင်ရာ ဝိညာဉ်ရေးအမြင်ရှိသလား။ “မြင်ဘူးသောအရာတို့ကို၎င်း၊ နောင်ဖြစ်လတံ့သောအရာတို့ကို၎င်း ရေးမှတ်လော့။" (ဗျာဒိတ် ၁:၁၉) ယေရှုခရစ်၏ဗျာဒိတ်ကျမ်းက ယေရှုကိုဖော်ပြသည်- ကိုယ်တော်၏အခွင့်အာဏာ၊ သစ္စာစောင့်သိမှု၊ ယဇ်ပူဇော်သောမေတ္တာ၊ တန်ခိုးတော်၊ ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်ဖို့... ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ ဗျာ ၁, သစ္စာနှင့် သစ္စာ တဂ် ဆီမီးခုံ, သမိုင်း
ရွှေမီးခုံ ခုနစ်လုံး၏ အလင်းကို ကြည့်ရန် လှည့်ပါ။
9 ၊ 2019 24 ရက်၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“ကျွန်မနဲ့ စကားပြောတဲ့အသံကို ကျွန်မ လှည့်ကြည့်တယ်။ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ရွှေမီးခုံ ခုနစ်လုံးတွေ့တယ်။” (ဗျာ။ ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ ကမ္ဘာ့အလင်းရောင်, ဗျာ ၁, ဆီမီးခုံ တဂ် ဆီမီးခုံ, အလင်း, ဗိမာန်တော်
သခင်ယေရှုသည် မီးခွက် ခုနစ်လုံး၏အလင်းဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်သည်။
9 ၊ 2019 23 ရက်၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“ထိုမီးခွက် ခုနစ်လုံးအလယ်၌၊ လူသားနှင့်တူသော ခြေဖဝါးအဝတ်ကို ဝတ်လျက်၊ ရွှေခါးပန်းကို စည်းလျက်၊ (ဗျာ။ ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း, ကမ္ဘာ့အလင်းရောင်, ဗျာ ၁, ဆီမီးခုံ တဂ် ဆီမီးခုံ, အလင်း, ဗိမာန်တော်
"မီးလျှံ" ကဲ့သို့ မျက်လုံးများမှ ဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိ၊
9 ၊ 2019 22 ရက်၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“သူ၏ဦးခေါင်းနှင့် ဆံပင်တို့သည် သိုးမွေးကဲ့သို့ဖြူ၍ နှင်းကဲ့သို့ဖြူ၏။ မျက်စိသည် မီးလျှံကဲ့သို့ဖြစ်၍၊ (ဗျာဒိတ် ၁:၁၄) “ဖြောင့်​မတ်​ခြင်း​လမ်း​၌​တွေ့​ရ​လျှင် ဖြူ​စင်​သော​ခေါင်း​သည် ဘုန်း​ကြီး​သော​သ​ရဖူ​ဖြစ်​၏။” (သု. ၁၆:၃၁) ဤနေရာတွင် ယေရှု၏ဆံပင်ဖြူသည် ကြီးမြတ်သော... ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ စစ်မှန်သောဝန်ကြီးဌာန, ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်, ဗျာ ၁, ကယ်တင်ရှင် တဂ် သွေး, မျက်စိ, မီး, ဓမ္မ
9 ၊ 2019 21 ရက်၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“သူ၏ခြေသည် မီးဖို၌ မီးလောင်သကဲ့သို့၊ သူ၏အသံသည် များစွာသောရေသံကဲ့သို့၎င်း၊" (ဗျာဒိတ် ၁:၁၅) ယေရှု ဘယ်သွားမသွားနိုင်ဘူးလို့ ဘယ်သူကမှ မပြောဘူး။ အရာခပ်သိမ်းကို အောင်နိုင်တော်မူ၏။ သူ့ခြေထောက်တွေက သူလိုချင်တဲ့ နေရာကို လှမ်းတယ်။ အခုပဲ သူ့ကို တင်ပြတာ အကောင်းဆုံးပဲ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ ဘုရင်တို့၏ဘုရင်, ဗျာ ၁, ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီး, အနန္တ တဂ် မျက်စိ, မီး, လျှပ်စီးကြောင်း, မိုးကြိုး
ထွန်းလင်းတောက်ပသောအလင်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၏နေမင်း၊ ယေရှု
9 ၊ 2019 20 ခုနှစ်၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“လက်ျာလက်တော်၌ ကြယ်ခုနစ်လုံးရှိ၍ ပါးစပ်မှ ထက်ထက်သောဓားတစ်စင်းထွက်၍ သူ၏မျက်နှာသည် အစွမ်းသတ္တိရှိ၍ နေရောင်တောက်ပသကဲ့သို့၊ (ဗျာဒိတ် ၁:၁၆) ကြယ်ခုနစ်လုံးသည် ခရစ်ယာန်အသင်းတော်ခုနစ်ခုအား ခရစ်တော်၏ဗျာဒိတ်တော်သတင်းစကားကို ပေးပို့ခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိသော အမှုဆောင်လုပ်ငန်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောခဲ့သည့်အတိုင်း ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ စစ်မှန်သောဝန်ကြီးဌာန, ကမ္ဘာ့အလင်းရောင်, ဗျာ ၁, ဖြောင့်မတ်ခြင်းရဲ့နေ တဂ် အလင်း, ဓမ္မ, ကြယ်များ, နေ, ဓား
ယေရှုသည် နှိမ့်ချပြီး နာခံမှုအပေါ် သူ၏လက်ကို တင်ထားသည်။
9 ၊ 2019 19 ရက်၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“သူ့ကိုမြင်တော့ ကျွန်တော်သေသလို သူ့ခြေရင်းမှာ လဲကျသွားတယ်။ မစိုးရိမ်နှင့်။ ငါသည် ပထမဆုံးနှင့် နောက်ဆုံးဖြစ်၏” (ဗျာဒိတ် ၁:၁၇) တမန်တော်ယောဟန်သည် လူသားတစ်ဦးအနေနှင့် ယေရှုကို မြေကြီးပေါ်ရှိစဉ် အကြိမ်များစွာ မြင်တွေ့ခဲ့ရသော်လည်း ယခုအကြိမ်သည် များစွာ ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ စစ်မှန်သောဝန်ကြီးဌာန, ဗျာ ၁, ဘုရားသားတော်, အနန္တ တဂ် ဓမ္မ, ကြယ်များ
9 ၊ 2019 18 ရက်၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
ငါသည် အသက်ရှင်၍ သေသောသူဖြစ်၏။ ရှုလော့၊ ငါသည် နိစ္စထာဝရ အသက်ရှင်နေ၏ အာမင်။ ငရဲနှင့်သေခြင်း၏သော့များ ရှိသည်။” (ဗျာဒိတ် ၁:၁၈) ယေရှုသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်နှင့်သေခြင်းအားလုံးကို အောင်နိုင်ခဲ့သည်– “ကြည့်ရှုလော့၊ ငါသည် နိစ္စထာဝရဖြစ်တော်မူ၏။” ထို့ကြောင့် သူသည် ငရဲကို အုပ်စိုးရန် ပြီးပြည့်စုံသော အခွင့်အာဏာ ရှိသည်- အဘယ်သူသည် ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ ဗျာ ၁, ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီး, ကယ်တင်ရှင်, ဘုရားသားတော်, အနန္တ, ဘုရားစကားတော် တဂ် သေခြင်း။, မီး, အောင်နိုင်သူ, ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း
ဗျာဒိတ်ကျမ်းများတွင် ရေးထားသည့်အရာများကို သင်မြင်နိုင်ပါသလား။
9 ၊ 2019 17 ရက်၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“မြင်ဖူးသောအရာများ၊ ဖြစ်သောအရာများ၊ နောင်ဖြစ်လတံ့သောအရာတို့ကို ရေးမှတ်လော့။” (ဗျာဒိတ် ၁:၁၉) ယေရှုခရစ်၏ ဗျာဒိတ်တော်သည် ယေရှုခရစ်ကိုယ်တော်တိုင် ပေါ်ထွန်းခြင်းအလို့ငှာ၊ ယေရှုသည် မြင်နိုင်ကြားနိုင်သောအရာများကို ရေးသားခြင်းအမှုကို လုပ်ဆောင်ရန် ယောဟန်အပေါ် သူ၏ညာလက်ကို တင်ထားသည်။ – နှင့်… ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ ဗျာ ၁ တဂ် သစ္စာရှိသက်သေ
9 ၊ 2019 16 ရက်၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“ငါ့လက်ျာလက်၌မြင်သော ကြယ်ခုနစ်လုံး၏ နက်နဲသောအရာနှင့် ရွှေမီးခွက်ခုနစ်လုံး၊ ကြယ်ခုနစ်လုံးသည် အသင်းတော် ခုနစ်ပါး၏ ကောင်းကင်တမန်များ ဖြစ်၍ သင်မြင်ရသော မီးခွက် ခုနစ်လုံးသည် အသင်းတော် ခုနစ်ခု ဖြစ်၏။ (ဗျာဒိတ် ၁:၂၀) ယေရှု၏လက်ယာလက်ရှိ ဓမ္မအမှုသည် ဘိသိက်ခံဓမ္မအမှုဖြစ်သည်။ ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ စစ်မှန်သောဝန်ကြီးဌာန, ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း, ဗျာ ၁, ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီး တဂ် နတ်သမီးလေး, သွေး, ဆီမီးခုံ, ဓမ္မ, ညာလက်, ကြယ်များ
ဘုရားကျောင်းခုနစ်ခု - ဧဝံဂေလိတရားနေ့၏ခုနစ်ရက်
23၊ 2019 ခုနှစ် 15 ရက်၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
ဗျာဒိတ် 1-3တွင်ဖော်ပြထားသောအာရှရှိအသင်းတော်ခုနစ်ခု (ရောမ၊ ကောရိန္သု၊ ဂလာတိ၊ ဧဖက်စသည်ဖြင့်) တွင်တည်ရှိသောအသင်းတော်အမျိုးမျိုးထံပေးပို့သောစာများကဲ့သို့) သည်ထိုအချိန်ကဘုရားသခင်၏အသင်းတော်များ၏အမှန်တကယ်အသင်းတော်များဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ စာတမ်းများကဲ့သို့ပင်၊ ချာ့ခ်ျခုနစ်ခုထံသို့ သတင်းစကားသည် အခြားသူများကြား၊ နားလည်ရန်နှင့် ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ၇, ဗျာ ၁, ဖြောင့်မတ်ခြင်းရဲ့နေ တဂ် သမိုင်း, နေ
ဘုရားကျောင်းခုနစ်ခု - ခုနစ်ရက် (ဆက်ရန်)
23၊ 2019 ခုနှစ် 14 ရက်၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး ဝိုင်းပြီးမှ ယေရိခေါမြို့ရိုးသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ပြိုကျ၏။ (ဟေဗြဲ ၁၁:၃၀) ဣသရေလလူတို့သည် ကတိထားရာပြည်ကို မသိမ်းပိုက်မီတွင်၊ ယေရိခေါမြို့ကို ဖြိုချပြီး လုံးလုံးလျားလျား အနိုင်ယူခဲ့ကြရသည်။ ယေရိခေါမြို့ကို အနိုင်ယူရန် အစီအစဉ်သည် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် ချမှတ်ထားသည့် ခုနစ်ရက်မြောက်သော အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ … ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ၇, ဘေဘီ, ဗျာ ၁ တဂ် တိုက်ပွဲ, သမိုင်း, တရားစီရင်ခြင်း။
ဘုရားကျောင်း ခုနစ်ခု - ဘုရားသခင် ၏ "ဒဏ်ပေးခြင်း" ခုနစ်ခု
10၊ 2019 ခုနှစ် 13 ရက်၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
ဝိညာဉ်ရေးအလင်းနှင့် စစ်မှန်သောဝတ်ပြုရေးသည် ဝိညာဉ်ရေးအမှောင်ထုနှင့် မှားယွင်းသောဝတ်ပြုရေး၏လှည့်စားမှုကို ဖော်ထုတ်ပြီး ဖျက်ဆီးပစ်သည်။ စစ်မှန်သောဝိညာဉ်ရေးအလင်းနှင့် စစ်မှန်သောဝတ်ပြုရေးသည် ယေရှု၏ဗျာဒိတ်သတင်းစကားဖြစ်သည်။ ဗျာဒိတ်သတင်းစကားသည်လည်း ဘုရားသခင်၏ “လက်စားချေခြင်း” သို့မဟုတ် “လက်စားချေခြင်း” (ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်သူ သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့်) နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရသူများနှင့် ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ၇, ဖန်ပုလင်း ၇ လုံး, ဗျာ ၁, ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီး, သစ္စာနှင့် သစ္စာ, နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းသူ တဂ် တရားစီရင်ခြင်း။, အမျက်ဒေါသ
ဧဖက်မြို့သို့ “ခုနှစ်ပါးတို့အလယ်၌ ကျင်လည်သောသူ…” မှ၊
ေမ ၁၆၊​ ၂၀၂၂ 12 ရက်၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“ဧဖက်အသင်းတော်၏ ကောင်းကင်တမန်ထံသို့ စာရေးပါ။ ရွှေမီးခုံ ခုနစ်လုံးအလယ်၌ ကျင်လည်သော လက်ျာလက်၌ ကြယ်ခုနစ်လုံးကို ကိုင်ဆောင်သောသူ မိန့်တော်မူသည်ကား၊ (ဗျာ။ ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ (၁) ဧဖက်, စစ်မှန်သောဝန်ကြီးဌာန, ကောင်းကင်ယေရုရှလင်, ဗျာ ၂, ဆီမီးခုံ တဂ် ဆီမီးခုံ, ကောင်းကင်ဘုံ, ဓမ္မ, ကြယ်များ
ေမ ၁၆၊​ ၂၀၂၂ 11 ရက်၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“သင်၏အကျင့်၊ သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ သည်းခံခြင်းတို့ကို ငါသိ၏။ မကောင်းသော သူတို့ကို အဘယ်သို့သည်းမခံနိုင်သနည်းဟူမူကား၊ သူတို့သည် တမန်တော်မဟုတ်၊ မဟုတ်ဟုပြောသောသူတို့ကို စုံစမ်း၍၊ မုသာကိုတွေ့တော်မူပြီ။” (ဗျာဒိတ် ၂၊ :၂) လူတိုင်း ဝိညာဉ်ရေးအရ ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာကို ယေရှု သိတယ်။ သူ့ဆီက ဘာမှ ဝှက်ထားတာ မရှိဘူး။ သူ… ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ (၁) ဧဖက်, စစ်မှန်သောဝန်ကြီးဌာန, မှားသောဝန်ကြီး, ဗျာ ၂ တဂ် ဆီမီးခုံ, အလင်း, ဓမ္မ
အချစ်မရှိရင် ငါတို့အလုပ်က အလကားပဲ။
ေမ ၁၆၊​ ၂၀၂၂ 10၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“သည်းခံခြင်းရှိ၍ ငါ၏နာမကိုထောက်၍ ပင်ပန်းလျက် မမေ့မလျော့ဘဲ” (ဗျာဒိတ် ၂:၃) သူတို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့် စိတ်ရှည်မှုကို အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်– ဤနေရာနှင့် ရှေ့အခန်းငယ်တွင် နှစ်ကြိမ်ဖြစ်သည်။ အစအဦး၌ အသင်းတော်သည် ပင်ပန်းခက်ခဲမှုနှင့် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုများကို စိတ်ရှည်သည်းခံနိုင်စွမ်းရှိသူများဖြစ်သည်။ "အဘို့ … ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ (၁) ဧဖက်, စစ်မှန်သောဝန်ကြီးဌာန, ဘုရားသခင်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ, ဗျာ ၂ တဂ် အချစ်ဦး, အချစ်
မင်းရဲ့ အချစ်ဦးကို ထားခဲ့ပြီလား
ေမ ၁၆၊​ ၂၀၂၂ မတ်လ ၉ ရက်၊ ၂၀၁၉ အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
"ဒါပေမယ့် မင်းရဲ့ အချစ်ဦးကို ထားခဲ့ပြီးပြီမို့ မင်းနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေ ငါရှိတယ်" (ဗျာဒိတ် ၂:၄) ပြဿနာကို အကျဉ်းချုပ်ပြောရလျှင် သူတို့သည် မှန်ကန်သောအရာများကို လုပ်ဆောင်နေသော်လည်း မှန်ကန်သောအကြောင်းပြချက်အတွက် မဟုတ်တော့ပါ။ မှန်ကန်သောအရာများကို လုပ်ဆောင်ခြင်း၏ နောက်ကွယ်မှ လှုံ့ဆော်ပေးသော တွန်းအားသည် သူတို့၏ ပထမဆုံးအချစ်သည် ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ တစ်ခုခု ဒါမှမဟုတ် တခြားတစ်ယောက်ဆီ ပြောင်းသွားတယ်။ … ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ (၁) ဧဖက်, ဘုရားသခင်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ, ဗျာ ၂ တဂ် အချစ်ဦး, အလင်း, အချစ်
မင်းရဲ့ "အချစ်ဦး" ထဲက ကြွေကျသွားပြီလား
ေမ ၁၆၊​ ၂၀၂၂ မတ်လ ၈ ရက်၊ ၂၀၁၉ အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“ထို့ကြောင့် သင်သည် လဲ၍သေခြင်းကို သတိရ၍ နောင်တရ၍ ရှေးဦးစွာသောအမှုတို့ကို ပြုလော့…” (ဗျာဒိတ် ၂:၅) ယေရှုသည် သူတို့ကျဆုံးခဲ့သည့်နေရာကို ပြန်စဉ်းစားရန် လိုအပ်ကြောင်း မိန့်ဆိုခဲ့ပြီး ကျမ်းချက်၌ မိန့်တော်မူခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အခန်းငယ်4ထိုနေရာသည် “သင်၏ဦးစွာချစ်ခြင်းကို စွန့်တော်မူပြီ” (ထိုနေရာကိုကြည့်ပါ… ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ (၁) ဧဖက်, ဗျာ ၂ တဂ် ကျသွားတယ်။, အချစ်ဦး, အချစ်
ဆီမီးခုံကို သင့်နှလုံးသားမှ ဖယ်ရှားလိုက်ပြီလား။
ေမ ၁၆၊​ ၂၀၂၂ မတ်လ ၇ ရက်၊ ၂၀၁၉ အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“…ဒါမှမဟုတ်ရင် မင်းဆီ မြန်မြန်လာမယ်၊ မင်းနောင်တရမှလွဲရင် မင်းရဲ့ဆီမီးခုံကို သူ့နေရာက ဖယ်ပေးမယ်။” (ဗျာ။ ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ (၁) ဧဖက်, ဗျာ ၂, ဆီမီးခုံ တဂ် ဆီမီးခုံ, အမှောင်, အချစ်ဦး, နှလုံး, အလင်း, အချစ်, ဗိမာန်တော်
ဒီဇင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၉ မတ်လ ၆ ရက်၊ ၂၀၁၉ အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည် ဝိညာဉ်ရေးစာအုပ်ဖြစ်ပြီး၊ ဤအရာကြောင့် အချိန်မကုန်နိုင်ပေ။ ၎င်းသည် အချိန်ကာလတိုင်းတွင်ရှိသော ဝိညာဉ်ရေးရာအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည် နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များတွင် လူသားတို့ရရှိစေလိုသော သမိုင်းဝင်အချိန်နေရာချထားမှုဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းချက်အပါအဝင် ဗျာဒိတ်ကျမ်းအပြည့်အစုံကို ပြီးမြောက်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြထားသည်။ … ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ အကျဉ်းချုပ် ပို့စ်များ တဂ် နတ်သမီးလေး, သမိုင်း
အမှတ် ၂၊ ၂၀၂၁ မတ်လ ၆ ရက်၊ ၂၀၁၉ အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
ဖြောင့်မတ်သောသူ၏ဆုလာဘ်အပါအဝင် ဧဝံဂေလိတရားနေ့ပုံပြင်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှတစ်ဆင့် ပြီးပြည့်စုံသောစာတန်းပါရှိသည်။ ဤဇာတ်လမ်းအပြည့်အစုံသည် မှားယွင်းစွပ်စွဲသူနှင့် ၎င်းတို့၏ မှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်များကို ဖော်ထုတ်ပြသထားသည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင်၊ ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သော ဖြောင့်မတ်သောလူမျိုးသည် ယေရှုခရစ်ကို ဂုဏ်တင်သကဲ့သို့ ဂုဏ်တင်ခံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆုံးစွန်ဆုလာဘ်မှာ ထာဝရ အတူရှိနေရန်ဖြစ်သည်... ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ 5th တံဆိပ်, ဖန်ပုလင်း ၇ လုံး, ခရစ်တော်၏သတို့သမီး, ဗျာ ၂း၂၂, ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီး, အကျဉ်းချုပ် ပို့စ်များ, သစ္စာနှင့် သစ္စာ တဂ် ယဇ်ပလ္လင်, သမိုင်း, တရားစီရင်ခြင်း။, ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း, ယဇ်ပူဇော်ခြင်း။
စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်အစစ်များနှင့် မွတ်စလင်အစစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။
1 ၊ 2019 မတ်လ ၆ ရက်၊ ၂၀၁၉ အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
ယနေ့ကမ္ဘာကြီးတွင် ခရစ်ယာန်များနှင့် မွတ်စလင်များနှင့် ဆက်စပ်နေပြီး အစ္စလာမ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ခရစ်ယာန်ယုံကြည်မှုမှာ များစွာရှုပ်ထွေးမှုများ ရှိနေပါသည်။ မျက်မှောက်ခေတ် ယုံကြည်ချက်စနစ်နှစ်ခုစလုံးမှ လူများသည် အများအားဖြင့် ၎င်းတို့မည်သူဖြစ်သည်ကို အမှန်ပင်မဟုတ်ပေ။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် အများစုသည် ၎င်းတို့၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သော ယုံကြည်ခြင်းကျမ်းကို အပြည့်အဝ မနာခံကြပါ။ … ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ မှားယွင်းသောကိုးကွယ်မှု, သစ္စာနှင့် သစ္စာ တဂ် သစ္စာရှိသက်သေ, သမိုင်း, အရေခြုံ, စစ်မှန်သောဝတ်ပြုရေး
Candlestick ကိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါ ဘာဖြစ်သွားမလဲ။
ေမ ၁၆၊​ ၂၀၂၂ မတ်လ ၆ ရက်၊ ၂၀၁၉ အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“ထို့ကြောင့် သင်သည် ဘယ်ကလာ၍ လဲကျသွားသည်ကို သတိရ၍ နောင်တရကာ ပထမအမှုကို လုပ်ဆောင်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရင် မင်းနောင်တမှလွဲရင် မင်းဆီ မြန်မြန်လာမယ်၊ မင်းရဲ့ဆီမီးခုံကို သူ့နေရာက ဖယ်ပေးမယ်။” (ဗျာဒိတ် ၂:၅) သခင်ဘုရား၏ဗိမာန်တော်မှ ဆီမီးခုံကို ဖယ်ရှားလျှင် ဘာဖြစ်မည်နည်း— ဆိုလိုသည်မှာ ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ (၁) ဧဖက်, မိစ္ဆာဘုရားရှိခိုးကျောင်း, မှားသောဝန်ကြီး, မှားယွင်းသောသွန်သင်ချက်များ, ဗျာ ၂, ဆီမီးခုံ တဂ် ဆီမီးခုံ, အမှောင်, နှလုံး, အလင်း
စစ်မှန်တဲ့အချစ်ကသာ မင်းကို "လွတ်လပ်တဲ့အချစ်" နဲ့ ဝေးကွာစေမှာပါ
ေမ ၁၆၊​ ၂၀၂၂5၊ 2019 အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“ဒါပေမဲ့ ငါမုန်းတဲ့ Nicolaitanes တွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို မင်းမုန်းဖို့ မင်းမှာရှိတယ်” (ဗျာဒိတ် ၂:၆၊ ကဘ) နီကိုလာတဲများသည် ဘယ်သူတွေလဲ။ သမိုင်းပညာရှင်များက ၎င်းတို့အား ယုံကြည်သူများကြားတွင် ညစ်ညမ်းလိင်ဆက်ဆံမှုကို မြှင့်တင်ပေးသည့် ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ အစောပိုင်းကာလတွင် တိုတောင်းသော ဂိုဏ်းတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြကြသည် - တစ်နည်းအားဖြင့် "လွတ်လပ်သောမေတ္တာ" စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဗျာဒိတ်တော်များသည် ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ (၁) ဧဖက်, ဗျာ ၂, သစ္စာနှင့် သစ္စာ တဂ် အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှု, အချစ်ဦး, အလကားအချစ်, အချစ်
သင့်တွင် ကြားနာရန် နားရှိပါသလား။
ေမ ၁၆၊​ ၂၀၂၂ မတ်လ ၄ ရက်၊ ၂၀၁၉ အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“ဝိညာဉ်တော်သည် အသင်းတော်တို့အား မိန့်တော်မူသောစကားကို နားရှိသောသူမည်သည်ကား ကြားပါစေ။” (ဗျာဒိတ် ၂:၇) ယေရှုသည် အာရှရှိအသင်းတော်တစ်ခုစီအား သူ၏သတင်းစကားအဆုံးတွင် ဤသို့မိန့်ဆိုခဲ့သည်– “နားရှိသောသူသည်၊ ဝိညာဉ်တော်သည် အသင်းတော်တို့အား မိန့်တော်မူသောစကားကို ကြားပါစေ။” အဓိပ္ပာယ်က သိပ်ရှင်းပါတယ်- မဟုတ်ဘူး… ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ (၁) ဧဖက်, ဗျာ ၂ တဂ် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်
ပရဒိသုရှိ သက်ရှိသစ်ပင်ကို သင်စားပါသလား။
ေမ ၁၆၊​ ၂၀၂၂ မတ်လ ၃ ရက်၊ ၂၀၁၉ အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“ဝိညာဉ်တော်သည် အသင်းတော်တို့အား အဘယ်သို့ မိန့်တော်မူသည်ကို နားရှိသောသူသည် ကြားပါစေ။ အောင်နိုင်သောသူအား ဘုရားသခင်ပရဒိသုအလယ်၌ရှိသော အသက်ပင်ကို ငါပေးမည်။” (ဗျာဒိတ် ၂:၇) အခန်းငယ် ၇ တွင်ဖော်ပြထားသော “ဘုရားသခင်၏ပရဒိသု” သည် ဘုရားသခင်ရှိရာ ကောင်းကင်ဘုံအခြေအနေဖြစ်သည်။ ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ (၁) ဧဖက်, ကောင်းကင်ယေရုရှလင်, ဗျာ ၂, ကယ်တင်ရှင်, ဘုရားစကားတော် တဂ် ကောင်းကင်ဘုံ, အောင်နိုင်သူ
သေပြီ – ဒါပေမဲ့ ရှုလော့၊ ငါသည် ထာဝရအသက်ရှင်နေပါသည်။
ေမ ၁၆၊​ ၂၀၂၂ မတ်လ ၂ ရက်၊ ၂၀၁၉ အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“စမုရနမြို့၌ရှိသော အသင်းတော်၏ ကောင်းကင်တမန်ထံသို့ စာရေးပါ။ အဦးဆုံးသောသူနှင့် နောက်ဆုံးသောသူတို့သည် သေလွန်၍ အသက်ရှင်လျက်ရှိသည်ဟု ဤအရာများ မိန့်တော်မူ၏။ (ဗျာ။ ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ (၂) Smyrna, ငါတို့အတွက်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ, ဗျာ ၂, ဘုရားသားတော်, နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းသူ တဂ် ငရဲ, ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း
ယေရှုကို စစ်မှန်သောကိုးကွယ်သူသည် ဝိညာဉ်ရေးဂျူးဖြစ်သည်။
ေမ ၁၆၊​ ၂၀၂၂ 1,2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“ကိုယ်တော်၏အကျင့်၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ ဆင်းရဲခြင်းတို့ကို ငါသိ၏၊ (သို့သော်လည်း သင်သည် ချမ်းသာသည်)၊ (ဗျာဒိတ် ၂:၉) ဧဖက်ခေတ် (အသင်းတော်ခေတ်) ကဲ့သို့ပင် စစ်မှန်သောဝတ်ပြုသူများသည် စစ်မှန်သောအလုပ်သမားများဖြစ်ခဲ့ကြသော်လည်း ယခုအခါ အထူးသဖြင့် ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ (၂) Smyrna, မှားသောဝန်ကြီး, မှားယွင်းသောကိုးကွယ်မှု, ဗျာ ၂, ဆီမီးခုံ, နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းသူ တဂ် ဆီမီးခုံ, အမှောင်, အရေခြုံ, ဂျူးများ, အလင်း, စာတန်, ဗိမာန်တော်, ဒုက္ခ
သခင်ယေရှုအပေါ် သစ္စာရှိပြီး သစ္စာရှိပါ - သေသည်အထိပင်
ေမ ၁၆၊​ ၂၀၂၂ 30၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“သင်ခံရမည့်အရာများကို မကြောက်ကြနှင့်။ သင်တို့တွင် အချို့ကို မာရ်နတ်သည် ထောင်ထဲသို့ ချပစ်လိမ့်မည်။ ဆယ်ရက်ပတ်လုံး ဆင်းရဲဒုက္ခခံရမည်။ သေသည်တိုင်အောင် သစ္စာရှိလော့။ အသက်သရဖူကို ငါပေးမည်။ (ဗျာဒိတ် ၂:၁၀) လူများနှင့် ဆင်းရဲဒုက္ခများကို သင်မကြောက်နိုင်ပေ။ ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ (၂) Smyrna, မှားယွင်းသောစီရင်ချက်များ, ဗျာ ၂, သစ္စာနှင့် သစ္စာ, နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းသူ တဂ် သရဖူ, စာတန်, ဒုက္ခ
"ဆယ်ရက်ပတ်လုံး ဆင်းရဲဒုက္ခ ရောက်ရလိမ့်မယ်"
ေမ ၁၆၊​ ၂၀၂၂ 29 ရက်၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“သင်ခံရမည့်အရာများကို မကြောက်ကြနှင့်။ သင်တို့တွင် အချို့ကို မာရ်နတ်သည် ထောင်ထဲသို့ ချပစ်လိမ့်မည်။ ဆယ်ရက်ပတ်လုံး ဆင်းရဲဒုက္ခခံရမည်။ သေသည်တိုင်အောင် သစ္စာရှိလော့။ အသက်သရဖူကို ငါပေးမည်။ (ဗျာဒိတ် ၂:၁၀) ယေရှုကလည်း သူတို့ကို ပြောပြကြောင်း သတိပြုပါ။ ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ (၂) Smyrna, ဗျာ ၂, သစ္စာနှင့် သစ္စာ, နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းသူ တဂ် အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးမှု, ဒုက္ခ
ဒုတိယသေခြင်းကြောင့် သင် ထိခိုက်မည်လား။
ေမ ၁၆၊​ ၂၀၂၂ ၂၈၊ ၂၀၁၉ အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“ဝိညာဉ်တော်သည် အသင်းတော်တို့အား အဘယ်သို့ မိန့်တော်မူသည်ကို နားရှိသောသူသည် ကြားပါစေ။ အောင်နိုင်သောသူသည် ဒုတိယသေခြင်း၌ မနာကျင်ရ။” (ဗျာဒိတ် ၂:၁၁) တဖန်၊ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော် မိန့်တော်မူသည်ကို သင်ကြားနိုင်သလော။ အထက်ဖော်ပြပါ ပို့စ်များတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဤမေးခွန်းကို အဆုံးတွင် မေးသည်... ပိုပြီးဖတ်ပါ
အမျိုးအစားများ (၂) Smyrna, ဗျာ ၂, ကယ်တင်ရှင်, သစ္စာနှင့် သစ္စာ, နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းသူ တဂ် သေခြင်း။, အောင်နိုင်သူ, ဒုက္ခ
စာမျက်နှာ1 စာမျက်နှာ2 … စာမျက်နှာ5 နောက်တစ်ခုကတော့ →